2019 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Mid-range ဖုန်း ၅ လုံး က ဘာတွေဖြစ်မလဲ? • TECH CORNER
2019 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Mid-range ဖုန်း ၅ လုံး က ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
2019 ခုနှစ်မှာတော့ Mid-Range SmartPhones တွေဟာ အရင်ကလို Processor အတော်အသင့်၊ battery ကြီးကြီး၊ Dual Camera ပါဝင်ခြင်းရှိ မရှိ ဒါမျိုးတွေနဲ့ တင်မဟုတ်တော့ပဲ Flagship Level Processors, Quad Camers, ပိုမြန်တဲ့ အားသွင်းစနစ်၊ AMOLED Display, Under-screen FingerPrint စတဲ့ အချက်တွေနဲ့အတူ အတော်လေး ရွေးချယ်လို့ ကောင်းလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ Tech Blog တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gizmochina မှ ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ 2019 ခုနှစ်အတွက် ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး $300, ၄ သိန်းခွဲ ဝန်းကျင် Mid-Range SmartPhones တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခု ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ စာရင်းကို Admin ကိုယ်တိုင်လဲ သဘောကျပြီး စာဖတ်သူ ဘော်ဒါတို့ရဲ့ စိတ်ကူးအမြင်တွေနဲ့ ရော ထပ်တူကျရဲ့လားဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။
Redmi Note 8 Pro ဟာ ပေးရတဲ့ ဈေးနှူန်းနဲ့ တန်တဲ့ အရာကို ပြန်ရတဲ့ mid-range smartphone တစ်လုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ လူတော်တော်များများရဲ့ သဘောကျခြင်းကို ခံရတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ နှိူင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ Redmi ဟာ Redmi Note 8 Series အလုံးရေ ၁၀ သန်းကို မိတ်ဆက်ပြီး ၃ လ အတွင်းမှာ ရောင်းချခဲ့ရပြီး ဒီ ရလဒ်ဟာ တစ်နေ့ကို ဖုန်းအလုံးရေ 110,000 တောင် ရောင်းချခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Redmi Note 8 Pro မှာ SD 730 ထက်တောင် တချို့နေရာတွေမှာ ရမှတ်ပိုများတဲ့ MTK ရဲ့ Gaming Processor G90T ကို အသုံးပြုထားပြီး 64MP camera, 4500mAh Battery, 18W fast charging စနစ်တွေနဲ့အတူ စတင်ရောင်းချဈေးနှုန်း $210, ၃ သိန်း ၂ သောင်း ဆိုတဲ့ ဈေးဝန်းကျင်မှာ အတော်လေး ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ Mid-Range ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သဘောမကျတဲ့အချက်ကတော့ LCD Display လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် Realme X2 ဟာ နံပါတ် ၁ နေရာကို ရရှိသင့်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ မြင်ပြီး Redmi Note 8 Pro ထက် ဈေးနည်းနည်း‌လေးများတာကြောင့် Gizmochina အနေနဲ့ ဒုတိယ နေရာကို ပေးခဲ့ပုံရပါတယ်။ Realme X2 ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင်တင်သွင်းခြင်းမရှိပဲ တရုတ်ကနေ မှာပြီး ဝယ်ယူလို့တော့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Personal Taste အရတော့ Realme X2 ကို ပိုမိုက်တဲ့ Hardware တွေကြောင့် ပိုပြီး သဘောကျမိပါတယ်။
Realme X2 မှာ Qualcomm ရဲ့ Gaming SoC Snapdragon 730G ကို အသုံးပြုထားပြီး Super AMOLED Display, Under-screen fingerprint, Quad Cameras, 4000mAh Battery with 30W fast charging စတဲ့ အထင်ကြီးလောက်စရာ Specs တွေ ပါဝင်ပြီး Starting Price $240, ၃ သိန်း ၆ သောင်း ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ စတင်ရောင်းချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
3.Redmi K20 (Mi 9T)
Best Mid-range SmartPhones of 2019 လို့ ဆိုလိုက်ရင် Redmi K20 က မပါမဖြစ်ပါဝင်ရမဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ xD Realme X2 နဲ့ သူတင်ကိုယ်တင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး Pop-Up camera နဲ့ Full-View Display အရသာကို ကောင်းကောင်းခံစားရတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Redmi K20 မှာ Snapdragon 730 ( G မပါတဲ့ SoC, G ဆိုတာ Gaming ကို ဆိုလိုတာပါ) ကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပြီး Under Screen Fingerprint, Super AMOLED Display, Full View Display စတဲ့ Specs တွေပါဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Midrangers တွေကြားမှာ မင်းသား တစ်ပါး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ K20 မှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က နောင်တော် K20 Pro အတိုင်း Camera Setup အတူတူကိုပဲ သုံးပေးထားတာပါ။ သင်ရော K20 ကို သဘောကျခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်လား? အော်အခုချိန်မှာ K20 ဝယ်မယ်ဆိုရင် တော်တော်ကြီးကို တန်နေပြီနော် ဈေးတွေ ကျနေပြီ xD
နံပါတ် ၄ နေရာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရင်းနှီးခြင်းမရှိတဲ့ Lenovo Z6 က ရရှိထားပြီး အပေါ်က ဖုန်း ၃ လုံးနီးနီး Specs တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ Lenovo အနေနဲ့ Software support ပိုင်းမှာ အားနည်းပြီး Globally ဖြန့်ချီမှူအပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့တာကြောင့် သိပ်ပြီး လူသိမများခဲ့တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Lenovo Z6 မှာ SD 730, 6.4 in Super AMOLED Display, Under Screen FingerPrint, Triple Camera Setup စတဲ့ Specs တွေပါရှိပြီး အလေးချိန်အနေနဲ့ 159 grams, 7.7 mm အထူပဲရှိတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က ဖုန်း ၃ လုံးကတော့ 180 grams အထက် လေးပါတယ်။ ပြီးတော့ Lenovo Z6 ဟာ စတင်ရောင်းချတဲ့ အချိန်မှာ $200, ၃ သိန်း ဝန်းကျင်နဲ့ စတင်ရောင်းချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
5.Xiaomi Mi9 SE
သင့်အနေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ ခပ်သေးသေး ဖုန်းတစ်လုံးကို ရှာနေတာဆိုရင်တော့ Screen ကြီးကြီး၊ Battery များများ၊ ခပ်လေးလေးထူထူ ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ အပေါ်က ဖုန်းလေးလုံးကို မေ့ပစ်လိုက်ပြီး Mi9SE လေးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။6လက်မ Super AMOLED Display နဲ့ 7.5 mm အထူပဲရှိတဲ့ Mi 9SE လေးဟာ အပေါ်က ဖုန်း ၄ လုံးထက်ပိုပြီး ပေါ့ပါး ကျစ်လစ်ပါတယ်။
Photo from Mi Community
ဒါပေမဲ့ Specs တွေ အရတော့ Mi9SE ဟာ နည်းနည်းလေး နောက်ရောက်နေတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး Snapdragon 712 SoC, 48MP Triple Camera setup with ultra-wide, 3070 mAh battery with 18W fast Charging စတဲ့ Specs တွေပါဝင်တဲ့ Mi9SE ကတော့ Midrangers တွေကြားထဲမှာ လူစိတ်ဝင်စားမှူ လျော့နည်းခဲ့တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတော့ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ 2019 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Mid-Range SmartPhones စာရင်းဟာ ဘော်ဒါတို့ရဲ့ အမြင်နဲ့ရော ထပ်တူကျရဲ့လား? ပြီးတော့ အခုစာရင်းထဲက ဘယ်ဖုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားလဲဆိုတာ Comment ပေးခဲ့ပါဦး။
Source | Cover Photo from Android Authority
LenovoMi9SERealme X2Redmi K20Redmi Note 8 Pro
iOS နှင့် Android OS တို့၏ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက်များ
Share via:0Shares0အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ SmartPhone Operating System တွေထဲမှာ Popular အဖြစ်ဆုံးနဲ့
3D Face Unlock VS in-display fingerprint readers
Posted By: Chaw Su Han Thawe
Share via:0Shares03D Face Unlock VS in-display fingerprint readers Unicode Biometric ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာတွေကို
Should you buy or upgrade to AirPods Pro?
Share via:0Shares0Apple ရဲ့ AirPods Pro နဲ့ AirPods2တို့ရဲ့ အဓိက ကွာခြားချက်တွေက
Do We Really Needa48MP Smartphone?
Share via:0Shares0ကျွန်တော်တို့ဟာ 48MP camera smartphone တစ်လုံးကို တကယ်ရော လိုအပ်ရဲ့လား? Unicode အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ
An App that can access MIUI Hidden setting (19,921)
iPhone တစ်လုံးကို ပြုလုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ? (15,954)